Nahatratra Dingana Lehibe Iray Vaovao ny Tontolon’ny Bilaogy Sodaney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2018 17:52 GMT
Etsy andaniny, nitombo ihany koa ireo bilaogy voasoratra amin'ny teny Arabo any amin'ny zoro hafa anatin'ity tontolon'ny aterineto mivalapatra ity. Mitovy lanja amin'ireo voasoratra amin'ny teny Anglisy ihany izy ireo (mety mbola manan-danja kokoa aza) ary mitrandraka mazava ny herin'ny aterineto ampiharany ny zony haneho hevitra.
Vondrompiarahamonina ofisialin'ireo bilaogera Sodaney manoratra amin'ny teny Arabo ny Sudanese Bloggers (bilaogy voafafa). Mpikambana ao i Amna. Mpikatroka mafana fo miaro ny zon'olombelona izy ary manana lahatsoratra be herim-po nadikan'ny namany iray miainga amin'ny Arabo mankany amin'ny Anglisy momba ny fanorisorenanà mpanao gazety iray azy ara-nofo (pejy voafafa), tanatinà gazety mpomba ny fitondràna:
Avy eo nanontany ahy izy raha te hiara-hiasa aminy aho ary nambarako taminy fa izay no tanjoko.
… Ary teo, tanatinà fitondrantena tsy mendrika, nilaza izy fa misy vidiny ny zava-drehetra sady nametraka ny tànany teo amin'ny lohaliko.
… Nitsambikina taty amiko izy ary niezaka nisintona ahy ho eo amin'ilay sezalava miankin-drindrina no sady nibitsika teny maloto. Tamin'io fotoana io, na ny endriny aza niova ary nivadika ho toy ny tena biby izy. Raha iny izaho nanohitra azy iny, nilaza taminy aho fa hikiaka mafy ary hiantso vonjy. Nefa dia nihomehy izy ary niteny tamiko hanao izay tiako fa tsy hisy hamonjy ahy eo.
Rako-tahotra aho ka dia nofelahiko mafy tamin'ny tànako ny tarehiny. Nahagaga fa dia navelany aho ary nihazakazaka namonjy ny aiko, nandeha teo alohan'ny mpitantsoratra sy ireo olona hafa vitsivitsy izay toa tsy niraharaha ka tsy nahatsikaritra zavatra hafahafa.
Manohitra mafy ny Silamo ny bilaogy iray amin'ny teny Arabo, antsoina hoe Un-Masking Islam (rohy maty). Imad (rohy maty) kosa etsy andaniny nisafidy ny teny filamatry ny Muslim brotherhood, “Islam no vahaolana,” ho an'ny bilaoginy. Samy mpikambana ao amin'ny Sudanese Bloggers izy roa ireo. Na i Black Gay Arab koa aza ao.
Koa satria mitohy mivelatra ny tontolon'ny bilaogy Sodaney, miresaka momba anà lohahevitra samihafa ireo bilaogera. Tafapetraka ao amin'ny anjerimanontolony ao Texas i Amjad taorian'ny nandaozany an'i Oman. Nanana zavatra vitsivitsy hambara momba ny loko mena izy:
Raha mandrara ny fivarotana zavatra mena rehetra i Arabia Saodita mandra-pahalasan'ny 14 Febroary (Andron'ny Mpifankatia), mivadika mena daholo kosa ny zavatra rehetra anatin'ny anjerimanontolonay noho ity antsoina hoe Andron'ny Mpifankatia ity…
Nitsikera ny fialan'i Spielberg amin'ny anjara asany amin'ny maha-mpanakanto azy anatin'ny Lalao Olaimpika 2008 any Beijing mba hanoherany ny zava-mitranga any Darfur kosa i AK:
Hisy olona ho tezitra ary heveriko fa ho i Sina izany! Naheno siosio momba ity aho efa am-bolana maro izao, ary iharanà tsindry be avy amin'ireo vondrona samihafa (Save Darfur, ohatra) i Spielberg, mba handray ity hetsika ity. Mazava ho azy fa hiezaka hanamaivana izany i Beijing, kanefa ho tezitra mafy ry zareo.
… Tsy andriko izay ahenoana ireo zavatra matsilo saina holazain'i Khartoum momba ity.
Nihomehy (pejy voafafa) tamin'ilay vaovao momba an'i Spielberg i Drima (izay manoratra boky momba ny fanoratana bilaogy sy ny fahalalahana miteny anatin'ny tontolo Silamo):
Ahahahahaha! Marina izany!
… Araka ny voalazako, efa maloto sahady ireo Lalao Olaimpika 2008 hatao any Beijing (pejy voafafa). Matotra be, ndao hafindra any Taiwan ireo lalao.
i Kizzie kosa anefa tetsy andaniny nanana hevitra iray samy hafa amin'izay:
Spielberg, matahotra ny tsy hilalaovan'i George Clooney anatin'ny sarimihetsikao intsony ve ianao sa inona? Nanao tsindry taminao ve ny Hollywood hanao izany? e, arahabaina. Raha tokony namaky momba an'i Darfur sy nampiasa ny sainao ianao, naleonao kosa nanao ny zavatra vendrana indrindra nisy hatrizay!
Ary toy ny mahazatra, mamela ity tononkalo ity i Jah Guide:
Mihazakazaka ato anatiko Andriamanitra
Andriamanitra anatin'ny renirano sy ny ranomasina
olona toa anao ry Rumi
toy izay fotsiny